Hello Nepal News » बार्सिलोनामा सिजनभरमा गरेको गोल स्वारेजले एथ्लेटिकोमा आधा सिजनमै गरे !
बार्सिलोनामा सिजनभरमा गरेको गोल स्वारेजले एथ्लेटिकोमा आधा सिजनमै गरे !
गत समर सिजनमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट फ्री ट्रान्सफरमा एथ्लेटिको मड्रिड पुगेका उरुग्वेन फरवार्ड अहिले नयाँ क्लबमा उत्कृष्ट लयमा खेलिरहेका छन् । उमेरले ३४ वर्ष पुगे पनि स्वारेजले अपत्यारियालो गरी गोल गरिरहेका छन् । र, टिमलाई लिग च्याम्पियन बन्ने स्पष्ट दिशामा लिड गरिरहेका छन् । गत राति एथ्लेटिकोले आफ्नो घरमा २०औं साताको खेल सेल्टा भिगोसँग खेल्दा २–२ को बराबरीमा रोकियो ।
तर, घरेलु मैदानमा टिम बराबरीमा रोकिएर २ अंक गुमाए पनि स्वारेज एक्लैले २ गोल गरेका थिए । ८९औं मिनेटमा गोल खाएपछि एथ्लेटिको जितबाट चुकेको थियो । गत राति गरेको २ गोलसँगै यो सिजन स्वारेजले ला लिगामा गरेको कूल गोल संख्या १६ पुगेको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो । उनी अहिले आफ्ना पूर्वसहकर्मी बार्सिलोनाका लिअलोनल मेस्सीलाई ३ गोलले पछि पारेर सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन् ।
बार्सामा सिंगै सिजनमा गरेको गोल एथ्लेटिकोमा आधा सिजनमै
बार्सिलोना छाड्नुअघि अन्तिम सिजन स्वारेजले ला लिगामा पूर्वक्लबका लागि जति गोल गरेका थिए, अहिले नयाँ क्लबमा उनले आधा सिजनमै त्यत्ति नै गोल गरिसकेका छन् । स्वारेजले बार्सिलोनामा सिजन २०१९–२० मा ला लिगामा २८ खेलबाट कूल १६ गोल गरेका थिए । तर, उनले एथ्लेटिको करिब आधा सिजन बाँकी छँदै बार्सिलोनामा सिंगै सिजनभर गरेजति गोल गरिसकेका छन् ।
जारी सिजन ला लिगामा एथ्लेटिकोले कूल २० खेल खेलिसक्दा स्वारेजले १७ खेल खेलेका छन् । एथ्लेटिकोले लिगमा अझै १८ खेल खेल्न बाँकी नै छन् । यहाँसम्म आइपुग्दा स्वारेजले ला लिगामा मात्रै १७ खेलबाट १६ गोल गरिसकेका छन् ।
सिजन २०१९–२० (बार्सिलोना) – २८ खेलबाट १६ गोल
सिजन २०२०–२१ (एथ्लेटिको) – १७ खेलबाट १६ गोल
प्रकाशित मिति २७ माघ २०७७, मंगलवार ०५:४९